The Fake Princess 'OP Bunny - ကိုရီးယား Manhwa - မန်ဟွာ - မန်ဂါနှင့် Light Novel Online ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအခမဲ့ဖတ်ပါ။
မင်းသမီး Fake Princess 'OP Bunny ပျမ်းမျှ 4.6 /5ထဲက 10
N / A, 23.4K အမြင်များရှိသည်
ဒရာမာ, စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း, သမိုင်း, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း, shoujo
မြင့်မားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ“ Gernoa de Lantera ၏ Duchess of Lantera” ကဆွဲဆောင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူမကအတုပဲ! သူမ၏အမည်ရင်းမှာ Larissa ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုများအတွက်ဈေးကွက်တွင်လမ်းပေါ်ဈေးရောင်းသူများအားလမ်းပြခဲ့ဖူးသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ။
သူမသည်သူမ၏မိသားစုမှ Duke သို့ရောင်းချခဲ့ပြီးသေဆုံးသွားသောသမီး၏အခန်းကဏ္playတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခဲ့သည်။ အန္တရာယ်ကျရောက်နေသည်။
duchess အတု၏လက်၌အနက်ရောင်အမွေးနှင့်အတူတစ် ဦး ကယုန်။
ဒီယုန်ကအတုပဲ! ယုန်သည်တိုက်ကြီးရှိလူတိုင်းကိုနှစ်သက်သော Grand Duke Hadelund Strelitz ဖြစ်သည်။ သူသည် Grand Duchy ၏သခင်နှင့်သူရဲကောင်းဖြစ်ပြီး၊ ငရဲမှသားရဲများနေထိုင်ရာယခုသူသည်စာလုံးပေါင်းမှုကြောင့်ချစ်စရာယုန်တစ်ကောင်ဖြစ်နေပြီ။
Larissa ၏ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးဂရုစိုက်ခံခဲ့ရသည့် Grand Duke သည် Larissa ၏အခြေအနေကိုသိရှိပြီးသူမအားလျှို့ဝှက်စွာကူညီပေးခဲ့သည်။
မင်းသားကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်နှင့်သူ့ကိုတိုင်းပြည်၏ဘုရင်မအဖြစ်လက်ထပ်ရန်လက်ထပ်ရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံနေရသည့် Larissa နှင့် Hadelund တို့သည်သူမ၏တန်ဖိုးကိုပိုမိုသိရှိလာရန်စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ ကြုံတွေ့ရသောကံကြမ္မာဖြစ်လာပြီး Larissa ၏ဘဝသည်တစ်ဖန်ပြောင်းလဲသွားသည်။
မင်းသမီး Fake Princess ၏ OP Bunny / 가짜공녀님의만렙토끼
manhwa၊ manhwa 18၊ solo leveling manhwa၊ manhwa အဓိပ္ပာယ်၊ manhwa manga၊ game manhwa၊ korean manhwa ကဲ့သို့သော manga အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို နှိပ်၍ ခံစားကြည့်ပါ အကောင်းဆုံး manhwaအကိုက်အခဲပျောက်ဆေး manhwa၊ manhwa နှင့် manga၊ silent war manhwa၊ manhwa အွန်လိုင်း၊ manhwa raw၊ လူယုတ်မာ manhwa၊ manhwa ရုပ်ပြ၊ blood bank manhwa, bl manhwa, yaoi manhwa, manhwa ဘာလဲ, manhwa bl, bj alex, manhwa, blood link manhwa, နတ်မဟွာရဲတိုက်၊ ငါတို့အကြောင်း တစ်ခုခုကို မဟွာ၊ အကြည့်အရှုဝါဒ မန်ဟွာ၊ မန်ဟွာ အဓိပ္ပါယ်၊ ပယောဂမုဆိုးမဟွာ၊ ဘယ်တော့မှ မုဆိုးမဟွာ၊ မန်ဟွာကို နိမိတ်ဖတ်ပါ၊ မန်ဟွာအွန်လိုင်းမှာ ဖတ်ပါ၊ အချစ်က ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီး မဟွာ၊ ငါ့ကို ကယ်တင်ပါ မဟွာ၊ လူကောင်း။
အခန်းကြီး 53 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 52 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 51 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 50 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 49 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 48 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 47 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 46 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 45 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 44 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 43 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 42 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2021
အခန်းကြီး 41 အောက်တိုဘာလ 23, 2021
အခန်းကြီး 40 အောက်တိုဘာလ 16, 2021
အခန်းကြီး 39 အောက်တိုဘာလ 16, 2021
အခန်းကြီး 38 အောက်တိုဘာလ 6, 2021
အခန်းကြီး 37 စက်တင်ဘာလ 25, 2021
အခန်းကြီး 36 စက်တင်ဘာလ 18, 2021
အခန်းကြီး 32 သြဂုတ်လ 24, 2021
အခန်းကြီး 31 သြဂုတ်လ 22, 2021
အခန်းကြီး 30 သြဂုတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 29 သြဂုတ်လ 10, 2021
အခန်းကြီး 28 သြဂုတ်လ 10, 2021
အခန်းကြီး 27 ဇူလိုင်လ 28, 2021
အခန်းကြီး 26 ဇူလိုင်လ 19, 2021
အခန်းကြီး 25 ဇူလိုင်လ 12, 2021
အခန်းကြီး 23 ဇြန္လ 27, 2021
အခန်းကြီး 22 ဇြန္လ 20, 2021
အခန်းကြီး 21 ဇြန္လ 14, 2021
အခန်းကြီး 20 ဇြန္လ 14, 2021
အခန်းကြီး 19 ဇြန္လ 14, 2021
အခန်းကြီး 18 မေလ 26, 2021
အခန်းကြီး 17 မေလ 26, 2021
အခန်းကြီး 16 ဧပြီလ 9, 2021
အခန်းကြီး 15 ဧပြီလ 9, 2021
အခန်းကြီး 14 ဇူလိုင်လ 12, 2021
အခန်းကြီး 13 ဧပြီလ 4, 2021
အခန်းကြီး 12 ဧပြီလ 4, 2021
အခန်းကြီး 11 မတ်လ 28, 2021
အခန်းကြီး 10 မတ်လ 19, 2021
အခန်းကြီး 8 မတ်လ 11, 2021
အခန်းကြီး7မတ်လ 9, 2021
အခန်းကြီး6မတ်လ 3, 2021
အခန်းကြီး5မတ်လ 3, 2021
အခန်းကြီး4ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2021
အခန်းကြီး3ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2021
အခန်းကြီး2ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2021
အခန်းကြီး 1 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2021
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2021